नेकपा विवाद « Janata Samachar
नेकपाको आधिकारिकता तथा निर्वाचन चिन्हको बारेमा देखिएको विवाद निरुपनका लागि निर्वाचन आयोगले तयारी थालेको हो ।
मकवानपुर । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाले नेकपाको विवादमा कुन पक्षसँग सहकार्य गर्ने भन्नेबारे कांग्रेसले तत्काल निर्णय नगर्ने बताउनुभएको छ । नेकपा विवादका कारण देशमा सुरु
अकर्मन्य बन्दै निर्वाचन आयोग: जस्ताकाे तस्तै नेकपा विवाद, न चुनावकाे तयारी
काठमाडौं । विभाजित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को विवाद किनारा नै नलगाई निर्वाचनसँग सम्बन्धित गतिविधि अघि बढाएको निर्वाचन आयोग अन्तत: अकर्मन्यतामा फस्ने देखिएको छ । सरकारले घोषणा गरेको मतदानको मिति
नेकपा विवाद नटुंग्याई निर्वाचन कसरी हुन्छ ?
काठमाडौं। विभाजित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का दुवै समूहले पार्टीको आधिकारिकताको दावी गरिरहेका छन् । तर यसबारे निर्णय गर्ने निकाय निर्वाचन आयोग भने नेकपाको आधिकारिकताको विवाद निरुपण गर्नेभन्दा निर्वाचनको तयारी
काठमाडौं । दुई समूहमा विभाजित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) काे विवादमा प्रवेश गर्न आफैंले बनाएको नियम बाधक हुने देखिएपछि निर्वाचन आयोगले त्यसलाई संशोधन गरेको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावलीमा रहेको निर्वाचन
बिहेको भोज खाएका ३५ बिरामी, देखियो यस्तो लक्षण
पछिल्लाे २४ घण्टामा थप ८,८५० जनामा कोरोना पुष्टि, ५२ को मृत्यु
काठमाडाैं उपत्यकामा एकैदिन थपिए ४,१९८ कोरोना संक्रमित